RASMI: Liiska LIX Xiddig Oo Abaalmarinta Xiddiga Sanadka Ee Premier League Ku Tartami Doona Oo Lasoo Saaray - Yaa Kusoo Baxay? - Gool24.Net
RASMI: Liiska LIX Xiddig Oo Abaalmarinta Xiddiga Sanadka Ee Premier League Ku Tartami Doona Oo Lasoo Saaray – Yaa Kusoo Baxay?
Maamulka horyaalka Premier League ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska lix ciyaaryahan oo ku tartami doona abaalmarinta xiddiga sanadka ee horyaalkaas oo xilli ciyaareedkan tartan adagi dhex marayo laba ciyaaryahan oo gaar ah.
Liiskan lixda xiddig ah ayay saddexda ciyaaryahan ee kala ah Jordan Henderson, Sadio Mane iyo Trent Alexander Arnold ku yeelatay kooxda koobka soo hanatay ee Liverpool, Danny Ings oo Southampton ah, Nick Pope oo Burnley ah iyo Jamie Vardy oo gool dhalinta horyaalka Leicester City ku qaaday liiska dhammaystiraya.
Aan ku bilawnee Jordan Henderson ayaa isaga oo kabtan ah Liverpool ku hoggaamiyay Premier League xilli uu horeba ugu soo guuleystay abaalmarinta ay bixiyaan qoraayada kubadda cagtu ee xiddiga sanadka ee PL.
Mane ayaa isaguna markale caddeeyay inuu yahay mid aad muhiim ugu ah oo ay ku tiirsanaan karto Liverpool isagoo wakhtiyo adag kala soo dabaashay Reds isla markaana soo dhaliyay 18 gool 7 kalena caawiye kasoo ahaa.
Daafaca midig ee Liverpool ee Trent Alexander Arnold oo isagu sidoo kale u tartamaya abaalmarinta da’yarka sanadka ee Premier League ayaa muhiim usoo ahaa ololihii ay horyaalka kusoo qaaday kooxdiisu isaga oo 13 caawimo soo sameeyay booska labaadna kaga jiray caawinta.
De Bruyne oo ah xiddiga kaliya ee Man City kaga jira liiskan isla markaana tartame xoogan ah ayaa jabiyay rekoodhka caawinta ee abid ee Premier League kaddib 20 caawin oo uu sameeyay halka uu sidoo kale 13 jeer shabaqa tagay.
Xiddiga kusoo guuleystay kabta dahabka ah ee Jamie Vardy ayaa 23 gool soo diiwaan gashaday isaga oo noqday ciyaaryahankii ugu da’da weynaa ee abid ku guuleysta abaalmarinta isla markaana Foxes kasoo caawiyay xilli ciyaareed ay tartan soo galeen.
Dhaliyaha Southampton ee Danny Ings oo mucjisadii xilli ciyaareedka lagu sifayn karo ayaa 22 gool lahaa qarkana u fuulay inuu gool dhalinta ku guuleysto isaga oo soo sameeyay wax aysan cidina ka filayn.
Ugu dambayn, goolhayaha Burnley ee Pope ayaa 15 kulan shabaq nadiif ah kusoo baxay xilli ciyaareedkan, walow uu abaalmarinta gacanta dahabka ah u waayay Ederson Moraes oo 16 kulan shabaqiisa ilaashaday haddana Pope ayaa soo sameeyay bandhig qofkasta layaab ku noqday.
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson iyo mashiinka Man City ee De Bruyne ayaa la filayaa inay noqon doonaan labada nin ee dagaalka ugu badani ku dhex maro hanashada abaalmarintan.